सिरहामा १२ दिनमै ४ बालबालिकाको मृत्यु, कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको आशंका – Nepal Press
#समाज कल्याण परिषद्
सिरहामा १२ दिनमै ४ बालबालिकाको मृत्यु, कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको आशंका
२०७८ असार १३ गते १०:०३
जनकपुरधाम । सिरहामा भटाभट बालबालिकाको मृत्यु हुन थालेपछि कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आइसकेको आशंका गरिएको छ ।
१२ दिनमै सिरहामा १६ वर्ष मुनिका चार बच्चाको मृत्यु भएको सिरहा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. नागेन्द्र यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य जटिल बनेपछि अस्पताल ल्याउने क्रममै चारै बच्चाको मृत्यु भयो । उनीहरूमा रुघाखोकी र ज्वरोको लक्षण देखिएको थियो ।
ती बच्चाहरूको मृत्यु के कारणले भयो भन्ने पुष्टि हुन सकेका छैन । उनी भन्छन्, ‘कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टकै कारण उनीहरूको मृत्यु भएको आशंका छ । मृतक बच्चाको पीसीआर परीक्षण गराउँदा कारण खुल्न सक्थ्यो । तर अभिभावकले आग्रह मानेनन् ।’
मृतक बालबालिकाहरू कुन ठाउँका थिए भन्ने रेकर्ड अस्पतालसँग छैन । ‘अस्पताल ल्याउने क्रममै ती बालबालिकाको बाटोमै मृत्यु भयो । भर्ना हुनै पाएनन् । त्यसैले हामीसँग रेकर्ड छैन’, डा. यादवले भने ।
तर मृत्युको कारण पत्ता लगाउन कसैले चासो देखाएका छैन । बच्चाहरूको मृत्युको कारण पत्ता लगाउने दायित्व कसको भन्ने जिज्ञासामा डा. यादवले भने, ‘स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाको काम हो । आफ्नो गाउँ/नगरमा के समस्या छ भन्ने कुराको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो भइरहेको छैन ।’
बिरामी परेलगत्तै नजिकको अस्पताल पुग्न, चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र औषधि सेवन नगर्न उनको सुझाव छ ।
धनुषामा भने बालबालिकाको मृत्यु भएको कुरा बाहिर आएको छैन । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका मेसु डा. प्रमोद यादवले पछिल्लो समय कोरोनाको लक्षण देखिएका कुनै बालबालिकाको मृत्यु नभएको बताए ।
कोरोनाको तेस्रो भेयिरन्ट आउन एक/डेढ महिना समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: २०७८ असार १३ गते १०:०३
सामूहिक राजीनामा दिँदै समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी, सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट
चितवनमा प्रचण्डसँग चुनाव लड्न बादल तयार, एमाले जेठ २ मा फर्किए पनि आफू यथास्थानमै
राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएका ब्राजिली राष्ट्रपति आइसोलेसनमा